Semalt Inoponesa Zvinhu Zvakagadzirwa Zvokugadzira Zvokurapa Kuti Udzikise Basa Rako
Kugadzirisa kugadzirisa inzira yekubudisa mashoko anobatsira kubva paIndaneti uye kuinyora pane yako website yega. Vazhinji webmasters uye vanyori vanotora zvinyorwa kubva pamabloggi akachengetwa uye mawebhusayithi kuti vawedzere mabhizinesi avo pachawo. Makambani, vashanduri, uye vashandisi vewebhu vanoshandisawo zvakasiyana webhupu yehuta ing kana zvigadzirwa zvemigodhi yekugadzirira kuti mabasa avo aiteke. Mazita anozivikanwa zvikuru ekugadzira zvinyorwa anotaurwa pasi apa - redundancia de servidores dedicados.
1: DOM Kupikisa
DOM kana Document Object Model inotsanangura mararamiro uye chimiro chezvinhu mukati me HTML ne XML mafaira. DOM parsers inoshandiswa nevadzidzisi nevatadzi kuti vawane maonero akadzika emapeji ewebhu akasiyana. Iwe unogona kushandisa DOM parser kuti ubvise zvinyorwa zvewebhu zviri nyore. XPath inguyo yakazara yekutsvaga mawebhusayithi anoda uye mabhuku uye inowirirana neMozilla, Internet Explorer neGoogle Chrome.Ne XPath, iwe unogona kupora zvinyorwa zvewebsite yakakwana kana yakasarura pasina chero chido chekugadzirisa unyanzvi.
2: HTML Kuparadzanisa
Vertical aggregation platform inoshandiswa nevasimudzi vane unyanzvi hwakawanda hwekombiyuta. Vanotarisa matanho akasiyana-siyana uye mazita uye kukohwa zvakagadzikana zvinogadziriswa maererano nezvinodiwa. Vamwe vavo vanovimba naKimono Labs uye mamwe matanho akafanana kuitira kuti basa ravo riite. Iyi nzira ichakubatsira iwe chete kana ukashandisa nhamba yevashandi uye bots, uye huwandu hwehuwandu hunoti hunobudirira hwei bots nemashamba.
Google spreadsheets inoshandiswa sechinhu chakasimba chekugadzirisa basa. Iyi nzira ine mukurumbira pakati pezvinyorwa. Kubva kuGoogle Docs, unogona kutumira mafaira aidiwa uye uite kuti zvive zvakaiswa maererano nezvose zvaunoda. Kunze kwei, iwe unogona kugara uchitarisa nekucherechedza hutano hwehuwandu kana huri kuiswa.
XPath kana XML Path Mutauro ndiyo mutauro wemubvunzo unoshanda pamagwaro e HTML ne XML. Sezvo zvinyorwa izvi zvakavakirwa pamusana wemuti, XPath inogona kushandiswa yekufamba nemazita ewebhu akasarudzwa uye inobatsira kutarisa huwandu hwehuwandu. Inopa zvakawanda zvakakosha kune webmasters mukubatana ne HTML uye DOM parsing, uye zvinyorwa zvinogona kubudiswa pawebsite yako pakarepo.
6: Rugwaro Rakafananidza Kufananidza
Ndiyo nzira yekufananidzira-inoshandiswa nevashanduri uye vadzidzisi uye vanobatana nemitauro yakadai saRuby, Python, uye Perl. Iwe unogona kushandisa izvi zvinyorwa zvinogadzirisa nzira yekutsvaga nhamba yakawanda yezvikwata zvakakwana kana zvishoma.
Zvose izvi zvinogadzirisa zvigadzirwa zvekugadzirisa zvinogadzirisa zvibereko zvakanaka, uye kune zvigadzirwa zvakadai seCURL, HTTrack, Node. js naWget izvo zvakasikwa kuti zvifambise basa rako. Iwe unokwanisa kutora zvese kana zviduku zvitsuwa sezvaunoda.